फुटबल उत्थान गर्न राज्यले पनि हेर्नुप-यो « News of Nepal
फुटबल उत्थान गर्न राज्यले पनि हेर्नुप-यो
इन्द्रमान तुलाधर हाल अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) का महासचिव पदमा हुनुहुन्छ । यसभन्दा अगाडि नरेन्द्र श्रेष्ठ अध्यक्ष हुँदा वा गणेश थापा अध्यक्ष हुँदा तुलाधर प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) पदमा हुनुहुन्थ्यो । यति मात्रै विषयले वहाँलाई परियच गराउँदा अधुरो नै देखिन्छ ।
एन्फामा प्रवेश गर्नु अगाडि वहाँ एक अन्तर्राष्ट्रिय पदक विजेता तेक्वान्दो खेलाडी र पूर्व फुटबल तथा प्राध्यापक समेत हुनुहुन्थ्यो । हाल वहाँ एन्फाका महासचिव हुनुका साथै ए डिभिजन क्लब संकटा क्लबका अध्यक्ष र अधिवक्ता समेत हुनुहुन्छ । वहाँले गत स्थानीय निर्वाचनमा पनि काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ९ मा प्रदेश सभासदमा नेपाली कांग्रेसबाट उम्मेदवार दिनुभएको थियो । फिरोज राजोपाध्याय ले तुलाधरसँग लिएको अन्तर्वाता
तपाईँ एउटा फुटबल खेलाडी पनि भइसकेको हुँदा पहिले फुटबल खेल्न कतिको समस्या रहेको छ ?
—मैले १२ वर्षको मुनिको उमेर समूहबाट फुटबल खेल्न शुरु गरेको थिए । शायद २०३८÷३९ सालको कुरा थियो मैले फुटबल खेल्दा निकै रमाएर खेल्थे । मैले मात्रै होइन अरुले पनि कुनै दवावमा फुटबल खेलेकै हुन्थ्यो । खेल्नलाई संकटा वरिपरिको स्थानमा समेत खेलिन्थ्यो । टुँडिखेलदेखि खुलामञ्चसम्म खेल्ने वातावरण थियो । पाएमा दशरथ रंगशाला पनि प्रयोग हुन्थ्यो । रमाईलै तरिकाले फुटबल खेलियो त्यो बेला ।
पहिले र अहिले फुटबलको तुलना गर्दा कति फरक पाउनुहुन्छ ?
—अहिले फुटबल व्यवसायिकीकरण भइसकेको छ । पहिले पैसा पनि पाइँदैन । केही राम्रा खेलाडी टोलीमा राख्न पनि आफैले पैसाको बन्दोबस्त गरी पैसा दिइने गरिन्थ्यो । हाम्रो क्लब संकटामै स्थानीय भन्दा बाहिरका केही खेलाडीलाई १५ सय रुपियाँसम्म दिइएको थियो । अहिले एउटा फुटबल खेलाडीले ५० हजारदेखि डेढ लाखसम्म लिइरहेको छ । यो भनेको फुटबल नेपालमा भविष्य बनेको उदाहरण हो ।
तर पनि प्रतिभावान फुटबल खेलाडी ननिस्केको हो कि खेल्न कमजोर भएको हो ? किन नेपाली फुटबल अन्तर्राष्ट्रियमा त्यति चम्कन सकेको छैन ? नेपाली फुटबल खस्केकै हो त ?
—अहँ यो मान्न तयार छैन । नेपाली फुटबल खस्केको छैन । अहिले झन पहिले भन्दा धेरै अन्तर्राष्ट्रिय खेल खेलिरहेको छ । फ्रेन्डली म्याच कम भएको मात्रै हो । यसलाई पनि अब एन्फाले बढाउँदै लग्नेछ । हालैको नतिजाले पनि फुटबल राम्रै भइरहेको प्रस्ट्याउँछ । मलेसियासँग हारे पनि हामी भन्दा वरियतामा माथि रहेको चिनियाँ ताइपेइसँग बराबरी खेल्यौ । यो भनेको कुनै नराम्रो नतिजा होइन । पहिले प्रतियोगिता कम हुन्छ । अहिले त सातै प्रदेशमा खेलाइने योजना बनेको छ । विद्यालयस्तर, जिल्लास्तर प्रतियोगिता गर्ने सुरसार भइरहेको छ । कति ठाउँमा शुरु पनि भइसक्यो । यसले नेपाली फुटबललाई उत्थान गर्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु । यसका लागि सरकारले हेर्नुपर्छ ।
सरकारले किन हेर्नुपर्ने फिफाबाट अनुदान आउँछ होइन र ?
—फिफाबाट अनुदान आउँछ । यो कुरा सहि हो । फिफाकै मात्रै पैसा खर्च गर्ने हो भने नेपालमा फुटबल खेलाउन कठिन हुन्छ । राज्यको दायित्व जति हुनु पर्ने त्यति भइरहेको देखिँदैन । जुनसुकै सरकार आएपनि फुटबललाई हेर्ने दृष्टि उही पाराको छ । यसपालि त फुटबललाई मात्र १० लाख दिइएको छ । जबकी पहिले ५० लाख थियो । यसरी त एन्फालाई आर्थिक संकलन गर्न गाह्रै छ । तपाईलाई भनिहालु एउटा प्रतियोगिता संचालन गर्न मात्रै करिब करिब ९ करोड खर्च हुन्छ । विदेशी कोच ल्याउनु प¥यो । क्लबलाई दिनु प¥यो । सरकारको आर्थिक सहयोगले कति नै धान्छ र ? मुख्य कुरा सरकारले पनि फुटबललाई क्रिकेटलाई झैं माया गरिदिनु प¥यो ।
प्रतियोगितामा सहभागि हुन रकम नपुग्ने, खेलाडी कसरी पाल्ने भन्ने जस्ता समस्या क्लबहरुले पनि गुनासो पोखिरहेका हुन्छन् । क्लब बचाउन के गर्न सकिन्छ एन्फाबाट ?
—क्लबहरुले प्रायोजक, एन्फा, महानगरपालिकाले दिइने रकमको आधारमा प्रतियोगितामा भाग लिइरहेका हुन्छन् । समस्या छ, यसको लागि पनि विस्तारै पहल गर्दैछौं । अहिलेलाई क्लबहरुले पनि सहयोग गर्नुपर्छ । महानगरपालिकाले पनि यसपालिदेखि रकम दिन थालेको छ । सो रकम अहिलेलाई नपुग भएपनि पछि बढाउन पनि सकिन्छ । क्लबहरुलाई सहज गर्न एन्फा सँधै लागिरहेकै छ । विस्तारै यो समस्या पनि हट्नेछ । मुख्यतया क्लबहरुले आम्दानी अनुसार खर्च गरेमा पनि यसको समाधान हुन सक्छ ।
महिला फुटबलको लागि एन्फाले त्यति ध्यान दिइएन भन्ने आरोप पनि आइरहेको छ । यो कतिको सत्य हो ?
—एन्फाले महिला फुटबलको लागि राम्रै गर्न ध्यान दिइरहेको छ । यो आरोप कति पनि साँचौ छैन । महिला फुटबलले एकपछि अर्को उपलब्धि हासिल गरिरहेको अवस्था छ अहिले । ओलम्पिक छनोट, एएफसी छनोट जस्ता प्रतियोगितामा दोस्रो चरणमा पुग्नु ठूलै उपलब्धि हो । हाम्रा बहिनीहरुले भारतमा लिग खेलेका छन् । यो सफलतालाई निरन्तर दिइनको लागि एन्फाले १२ महिना नै उनीहरुलाई व्यस्त राख्ने चाँजोपाँजो मिलाइरहेको छ । महिला लिग खेलाउने वातावरण पनि बनिसकेको छ । जेठ असार श्रावण तीन महिना उपमेयर कप हुन्छ । भदौमा राष्ट्रिय लिग हुन्छ । सातै प्रदेशका सरकारलाई महिला लिग खेलाउने वातावरण मिलाउन एन्फाले कुरा गरिसकेको छ । विदेशी खेलाडी पनि ल्याउने योजनामा छ एन्फा । भुटानका पनि कयौं खेलाडी राम्रा खेल्छन् ।
नेपालको एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय रंगशाला दशरथ रंगशाला बन्न ढिलो हुँदा एन्फालाई कतिको गाह्राे भइरहेको छ ? त्यहाँ त पहिले जस्तै बनिरहेको जस्तो छ ?
—हामीले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्सँग कुरा गरेका छौं । छिटो सकिने पनि छाँटकाँट छ । दशरथ रंगशाला नहुँदा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता गराउन गाह«ो त भइरहेकै छ । पहिले पनि दशरथ रंगशालामा सुविधा नहुँदा कठिन नै छ । डे«सिङ रुम छैन, जुडो, कराते, तेक्वान्दो हलमा प्रशिक्षण भइरहेको हुन्छ । त्यो हल उपलब्ध नहुने । कठिनै छ ।
कस्तो हुनुपर्छ त सुविधा सम्पन्न भन्नाले ?
अहिले हामीले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता गर्न त्यही अनुसारको सुविधा हुनुपर्ने माँग परिषदलाई राखेका छौ । आवश्यक डे«सिङ रुम हुनुप¥यो । मिडिया सेन्टर हुनुप¥यो । बे्रेकमा चमेना गर्न हल हुनुप¥यो । जस्तो विदेशमा छ त्यस्तो भएमा पनि नेपालमा धेरै अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता गर्न सकिन्छ । पहिले यस्तो सुविधा नहुँदा त हामीले विश्वकप छनोट जस्ता खेलहरु समेत त्यही रंगशालामा गराउन सफल भएका थियौं । यदि परिषदले मानेमा हामी नै बनाउन पनि तयार छौं ।
विवाद पनि आइरहेको छ । एन्फामा हालै पंकज नेम्वाङज्युलाई वरिष्ठ उपाध्यक्षमा मनोनित गर्दा त्यहीका केही पदाधिकारीले विरोध गर्नुभयो । यसले भविष्यमा समस्या ल्याउन सकिन्छ होइन र ?
—त्यो त हो । समस्या आउँछ पनि नकारात्मक पनि हुन्छ । संगठनभित्र विवाद भन्दा पनि तर्क वितर्क, वादविवाद हुनु पनि संगठनको कमी कमजोरी हटाउन मद्दत पुग्छ । तपाईले भन्नुभए जस्तै यसले भविष्यमा विवाद ल्याउँछ । तर अहिले यो विवाद सल्टीसकेको छ । वहाँहरुले भने जस्तै एन्फाले निर्णय लिइसकेको हुनाले यो विवाद दीर्घकालीन असरमा नपर्ने भइसकेको छ ।
हालै एन्फाआबद्ध चार जिल्लाका अध्यक्षले गत वर्ष वैसाखमा सम्पन्न एन्फाको चुनावमा चलखेल भएको भनेर मिडियामा बोल्नुभयो । यसमा एन्फाले जवाफ दिइरहेको छैन । वहाँहरुको समस्या समाधान गर्न एन्फा किन अगाडि नसरेको ?
—एन्फा भित्र बसेर छलफल गर्नु पहिलो कदम हुन्छ । एन्फाको आबद्ध भएर यस्तो गर्नु पनि विधान विपरितको विषय हो । एन्फाविरुद्ध मिडियामा जानु त्यो अनुसासनहीन हो । यसमा राजनीति भयो कि ? कुनै कुराको रिस पोखेको हो कि ? यस्तो लाग्छ मलाई । अहिलेसम्म कार्वाहीको प्रक्रिया अगाडि पनि बढाएको छैन ।
टाशी घलेलाई मानार्थ अध्यक्षबाट अवकाश दिइएकोमा पनि विवाद भयो । एक्कासी यो विवाद कसरी आइपुग्यो ?
—यो विषयमा टिप्पणी गर्न सकिँदैन । विषय अदालतमा पुगेको हुँदा एन्फाले केही भन्ने अवस्था छैन ।
एन्फाले राम्रै गरेको भनेको दावी छ यो एक वर्षमा । यसमा अलि प्रस्ट्याइदिनु हुन्छ कि ? एन्फाले साँच्चिकै गएको एक वर्ष उपलब्धि हासिल गरेको छ त ?
—म त यो एक वर्ष कहिल्यै नभएको विषयहरु भएको मान्छु । स्थगित ए डिभिजन लिग भयो । महिला टोलीले विदेश र स्वदेशमा राम्रो उपलब्धि हासिल ग¥यो । ओलम्पिक, एएफसी छनोटमा दोस्रो चरण पुग्नु कुनै सानो कुरा होइन । निति नियमहरु बन्न थालेका छन् ।
जस्तै आर्थिक नियमावली, कर्मचारी नियमावली, अनुसासन समिति, स्थायी समिति आदि आदि । पहिले बोली चालीमा आर्थिक कारोबार हुन्छ भने अब यो नीति नियमले सबैलाई आ–आफ्ना पदमा इमान्दार बन्न मद्दत पु¥याउँछ । यसैले पनि यो उपलब्धि नै भन्न सकिन्छ ।
तपाईं संकटा क्लबका अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ । तपाईंले एन्फाको पद सम्हालेर आफ्नो क्लबलाई कसरी व्यवस्थित गरिरहनु भएको छ । क्लबलाई कतिको बलियो बनाउनु भएको छ ?
—दुबै पद बरोबर सम्हालिरहेकै छु । क्लबको भवन अहिले यही (संकटामा) बनिरहेको छ । अहिले एक तल्ला सकियो । क्लबका खेलाडीलाई अभ्यास गराउन सांगामा जग्गा लिइसकेको छु । १५ वर्षको लिजमा दिइने योजना छ । अर्को वर्षदेखि त्यो एकेडेमी पनि शुरु हुनेछ । अर्को क्लबले आम्दानी गरेको रकमको ४० प्रतिशत फुटबललाई छुट्याउने गरेको छु ।
क्लबले आम्दानी सबै खर्च गरेमा भरिपरि आउँदा रकम जोगिँदैन । यसैले आम्दानीअनुसार क्लबहरुले योजनावद्ध रुपमा रकम खर्च गर्नुपर्छ । मानौं १ करोड आम्दानी छ भने ४० लाख फुटबलमा खर्च हुन्छ । एन्फाबाट केही रकम, महानगरपालिकाबाट केही रकम र प्रायोजकबाट केही रकम आउँछ । त्यही अनुसार हामीले व्यवस्थित ढंगले खर्च गर्दै क्लबलाई व्यवस्थित ढंगले बलियो बनाइरहेको छौं
पार्टी लोकतान्त्रिक, व्यवहार अलोकतान्त्रिक कहिलेसम्म ?
पशुपतिमा राखिएको सुनको जलहरी च्यातियो, अख्तियारद्वारा
नेपालले पाउने भयाे अमेरिकी कम्पनी जोन्सन
‘अदालतको अवहेलना गर्ने ओलीलाई कारबाही हुन
सङ्क्रमणमुक्त हुने दर घट्दो
काठमाडौंमा थप ५९७ जनामा कोरोना संक्रमण..
लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट पद्धतिबारे अन्तरक्रिया, निर्णायक..
ईपीएस पास भएकालाई कोरिया पठाउने काम..
काठमाडौंमा थप ५९७ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, ५९३८ सक्रिय संक्रमित
देउवासँगको भेटपछि माधव नेपालसँग भेटवार्ता गर्दै प्रचण्ड
कोरोना सङ्क्रमणबाट एकै दिन पाँचको मृत्यु
शनिबारदेखि फेरि लकडाउन सुरु हुँदै
पेरुको राष्ट्रपतिमा पेद्रो कास्टियो निर्बाचित, गरिबी र असमानता हटाउने प्रतिवद्धता
बालविकास सहजकर्ताको तलब वृद्धि कार्यान्वयनमा आएन, पालिकामा तालाबन्दी